March 11, 2018 – Thutastar
သခင်မတောင်ပေါ်မှာ ဘုရားထီးတင် ကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့ ပပဝင်းခင်တို့ ညီအစ်မ
Comments Off on သခင်မတောင်ပေါ်မှာ ဘုရားထီးတင် ကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့ ပပဝင်းခင်တို့ ညီအစ်မ
သရုပ်ဆောင် ပပဝင်းခင်နဲ့ သူ့ညီမတို့ကတော့ မိန်းမရဲ သခင်မတောင်ပေါ်မှာ ဘုရားစေတီတစ်ဆူကို ထီးတင်ကုသိုလ်ယူခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအကြောင်း သတင်းကို သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှာ မနေ့ မတ်လ ၁၁ ရက်ကပဲ တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပပဝင်းခင်က မကြာမကြာကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်နေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ မိန်းမရဲသခင်မတောင် ယောက်ကော်သာသနာ့နယ်မြေ၌ တည်ထားသော ” ပြည်ငြိမ်းအေး စူဠာမဏိစေတီတော် ” ရွှေထီးတော် စိန်ဖူးတော်တင်လှူပွဲ ပပတို့ မိသားစု စေတီတော်အတွက် စေတီတော်၏ အဝင် မုဒ်ဦးအလှူ , ဘုရားဋ္ဌာပနာရန် ဘုရားဆင်းတုတော်များ ကြေးဆင်းတုတော်(၃)ဆူ-ကြေးမောင်း နှင့် ဘက်စုံ ဝတ္ထုတို့ လှူ ဒါန်းခဲ့ပါတယ် ဟင်္သာတမြို့ ၌ တည်ထားကိုးကွယ်မည့်စေတီတော်တွင်လည်း ပပတို့ မိသားစု အရံစေတီတော်ကိုလည်း လှူဒါန်းထားပါသည် ချစ်ရသောပရိသတ်များ
Comments Off on အမျိုးသမီး အင်္ဂါနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိကောင်းစရာအချက် (၁၀) ချက်
အမျိုးသမီး အင်္ဂါ ဆိုတဲ့အသံကြားလိုက်ရရင်ကို လူအများစုက ရှက်သလို၊ ကြောက်သလို ဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလို ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာ များပြားတဲ့ နိုင်ငံ မပြောနဲ့။ အမေရိကန်လို ပွင့်လင်းမှုရှိတဲ့နိုင်ငံမျိုးမှာတောင် ၂၀၁၆ ခုနှစ် က စစ်တမ်းအရ အမျိုးသမီးငယ် ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာ Vagina ဆိုတဲ့စကားအစား တစ်ခြား အသုံးအနှုန်းတွေကိုသာ သုံးကြကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ အမျိုးသမီး အင်္ဂါကို ဘယ်လိုပဲ ခေါ်ခေါ် ကျွန်တော်တို့အားလုံး သဘောတူရမယ့် အချက် တစ်ချက်တော့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ အမျိုးသမီး အင်္ဂါတွေဟာ လူသားတွေ မျိုးပွားဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ကျေနပ်မှုအတွက် အရေးပါတဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ ပါဝင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ တစ်ဝက်လောက်နီးပါးဟာ အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်ကြပေမဲ့ မျိူးပွားမှု စနစ်မှာ အရေးပါတဲ့
သင်ဇာဝင့်ကျော်နဲ့တွဲပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတော့မယ့် အဆိုတော် မနော
Comments Off on သင်ဇာဝင့်ကျော်နဲ့တွဲပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတော့မယ့် အဆိုတော် မနော
နာမည်အကြီးအဆိုတော် တစ်ယောက်ဖြစ်သူ မနောနဲ့ ဖေ့စ်ဘွက် နာမည်အကြီးဆုံး ဆယ်လီတစ်ယောက်ဖြစ်သူ ဖြူဖြူထွေးကတော့ ခုမကြာခင်မှာပဲ ရုပ်ရှင်ကားကြီးတစ်ကား အတူတူ ရိုက်ကြတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွက်မှာ လူစိတ်ဝင်စားမှုခံရသူတွေ ထုံးစံအတိုင်း သူတို့လည်း သရုပ်ဆောင်တွေ ဖြစ်လာကြတာပါ။ ကိုယ့်အတွက် ရုပ်ရှင်ကားကြီး အားပေးကြအုံးနော် ချစ်တို့ လို့ ဖြူဖြူထွေးက သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားထားပါတယ်။ ဖြူဖြူထွေး ဟာသဗွီဒီယိုဖိုင်များနဲ့ တောရောမြို့ပါ ပရိတ်သတ်တွေရရှိခဲ့ပြီးနောက် ကြော်ငြာဗွီဒီယို၊ ဓာတ်ပုံတွေအပြင် တစ်ချို့ ဇာတ်လမ်းတို၊ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာပဲ သရုပ်နေရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ မနောကလည်း တစ်နိုင်ငံလုံး မသိသူမရှိအောင် အောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက် ကြော်ငြာများစွာ ရိုက်ကူးထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းသစ်တွေလည်း အဆက်မပြတ်ထွက်နေဆဲဖြစ်ပြီး ပရိတ်သတ်ရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ထိန်းထားနိုင်သူပါ။ ခုတော့ ရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာ ပြေတီဦး
ယနေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ အဆိုတော် စန္ဒီမြင့်​လွင် နဲ့ ကိုသီဟလွင် တို့ မင်္ဂလာပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်များ
Comments Off on ယနေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ အဆိုတော် စန္ဒီမြင့်​လွင် နဲ့ ကိုသီဟလွင် တို့ မင်္ဂလာပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်များ
ချောက်ထဲကျပြီး ကားမှောက်ခဲ့တဲ့ မင်းမင်းဦးဇာတ်ပွဲအတွက် ညကြေးမယူပဲ ကူညီခဲ့တဲ့ ဖိုးချစ်တို့ အဖွဲ့
Comments Off on ချောက်ထဲကျပြီး ကားမှောက်ခဲ့တဲ့ မင်းမင်းဦးဇာတ်ပွဲအတွက် ညကြေးမယူပဲ ကူညီခဲ့တဲ့ ဖိုးချစ်တို့ အဖွဲ့
ကားမှောက်ခဲ့တဲ့ မင်းမင်းဦးဇာတ်ပွဲအတွက် ညကြေးမယူပဲ ၁ ညစာ ကူညီခဲ့တဲ့ ဖိုးချစ်တို့ အဖွဲ့မကြာသေးခင်ကပဲ သူပိုင်တဲ့ အိမ်နဲ့ခြံကို ပေါင်ပြီး သဘင်အဖွဲ့သားတွေကို ကူညီခဲ့တဲ့ ဇာတ်မင်းသား ဖိုးချစ်ဟာ အခုလဲ ဇာတ်အဖွဲ့ကား ချောက်ထဲကျသွားလို့ အခက်အခဲဖြစ်သွားတဲ့ မင်းမင်းဦး ဇာတ်ပွဲကို ညကြေးမယူပဲ ကူညီခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ မင်းမင်းဦးဇာတ်အဖွဲ့ဟာ ရှမ်းပြည်က ပွဲကပြီးအပြန် ရက်စောက် နဲ့ နောင်ချိုကြား တောင်အဆင်းမှာ ကားမှောက်ပြီး မင်းသား မင်းသမီးအပါအဝင် ၇ ယောက် သေဆုံးကာ ၁၇ ယောက် ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ သိရပြီး ဒဏ်ရာရသူတွေကို မေမြို့ ဆေးရုံမှာ တင်ထားပါတယ်။ မင်းမင်းဦးဇာတ်အဖွဲ့ဟာ ပြဇာတ်မင်းသား မင်းမင်းထိုက် တည်ထောင်ထားတဲ့ ဇာတ်သဘင်လို့ သိရပြီး တစ်ချိန်က
သေမင်းတမန်ရထားလမ်းဖောက်ရာတွင် အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့သူများ နေရာဟောင်းကို တစ်ခါလာရောက်
Comments Off on သေမင်းတမန်ရထားလမ်းဖောက်ရာတွင် အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့သူများ နေရာဟောင်းကို တစ်ခါလာရောက်
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဆိုးရွားဆုံးနဲ့ အကျည်းတန်စွာ နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားခဲ့သည့် သေမင်းတမန်ရထားလမ်းဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ဂျပန်တွေစိုးမိုးစဉ် မြန်မာနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကို ဆက်သွယ်ဖောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်တွေဟာ စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေ သယ်ယူဖို့ ခရီးအရှည် ၄၁၅ ကီလိုမီတာရှိတဲ့ ရထားလမ်းကို ထောင်ပေါင်းများစွာသော ချွေးတပ်သားတွေနဲ့ ၁၉၄၃ ခုနှစ် ကနေ ၁၉၄၅ ခုနှစ်ထိ နှစ်နှစ်တာဖောက်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရထားလမ်းဖောက်လုပ်နေစဉ်အတွင်း မြန်မာလူမျိုးများအပါအဝင် ချွေးတပ်သားတွေရဲ့ ဘဝက တစ်ကယ့်ငရဲတွင်းကြီး ကျနေသလို အငတ်ငတ်အပြတ်ပြတ်၊ ရောဂါဘယထူပြောစွာနဲ့ ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြရတဲ့အပြင် ဂျပန်တို့ရဲ့ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု မျိုးစုံကိုလည်း ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ လူပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ သေမင်းတမန်ရထားလမ်းဖောက်လုပ်မှုမှာ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံက လူအချို့က သူတို့ရဲ့ ငရဲခန်းကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အတိတ်နေရာဟောင်းဆီကို အလည်အပတ်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဆိုင်ကယ်ကြော်ငြာရိုက်ကွင်း ကနေ ခပ်လန်းလန်း ပုံတွေ တင်လိုက်တဲ့ လုလုအောင်
Comments Off on ဆိုင်ကယ်ကြော်ငြာရိုက်ကွင်း ကနေ ခပ်လန်းလန်း ပုံတွေ တင်လိုက်တဲ့ လုလုအောင်
ကွီးတို့ အသဲစွဲ ခေးကြီးလု တစ်ယောက်ကတော့ Bajaj Myanmar-Easy Rider ဆိုင်ကယ်ကြော်ငြာရိုက်နေပါတယ်။ အမြဲတမ်းပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရီစရာလေးတွေရေးပြီး postတင်တတ်တဲ့ ခေးကြီးလု က ကြော်ငြာရိုက်ကွင်းနားတဲ့အချိန်လေးမှာဒီလိုလေးရေးတင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ကော်ဖီဆိုင်မာ ထိုင်စောင့်နေရတာမဟုတ်ဘူးးးးနော် ပူတယ်လမ်းဘေးမာ အမြန်ပြန်လာခဲ့ဒေါ့ ခစ်ခစ် အချစ်ရေမြန်မြန်လာကွာ Bajaj Myanmar-Easy Rider စီးပီးလည်လည်သွားမျယ်လေ ???????????????????? Bajaj Myanmar-Easy Riderကုမ္ပဏီရဲ့ FB Page မှာ ကြော်ငြာထားတဲ့စားသားတစ်ချို့ကတော့ *လုလုအောင်ဆိုတဲ့ အလှပဂေးကို သင်သိတယ်ဟုတ်? “ လု ”ရဲ့ ကောက်ကြောင်းတွေကို မမြင်တာ ပြဿနာမရှိပေမယ့် Dominar 400 ရဲ့ ကောက်ကြောင်းတွေကို မမြင်ဘူးဆိုရင်
Comments Off on တစ်စုံတည်းသာရှိတဲ့ကျောင်းဝတ်စုံကိုဝတ်ပြီး ရေစိုရင်အကြော်ဖိုမှာသွားကင်ခဲ့ရတဲ့ဘဝကနေ ခေတ်သစ်ဝေဿန္တရာ သူဋ္ဌေးကြီးဖြစ်လာသူ
ခေတ်သစ်ဝေဿသ၁န္တရာသူဋ္ဌေး ဦးစိုးတင့်(စိုးလျှပ်စစ်)အ​ကြောင်း တစ်စုံတည်းသာရှိတဲ့ကျောင်းဝတ်စုံကိုဝတ်ပြီး ရေစိုရင်အကြော်ဖိုမှာသွားကင်ရသူ သူများအိမ်မှာကပ်နေပြီး အိမ်ရှင်ကျေနပ်အောင်ရေစည်လှည်းတွန်းခဲ့ရသူ (18.5.2016)နေ့က ဆိုက်ကားဆရာ ၅၀အတွက်သိန်း၅၀လှူ ဒါန်းပြီးနောက်ညနေပိုင်းမှာ မိုးပြေးလေးများဖြင့် အလှူဒါနကိုရေစက်ချလိုက်၏။ (19.5.2016) နေ့မှာ ထပ်မံပြီး ဆိုက်ကားဆရာ ၆၃၀ ကျော်အတွက် တစ်ယောက်တစ်သိန်း.ကိုယ်ထိလက်ရောက်လှူဒါန်းပြီးသည်နှင့်ပျဉ်းမနားတမြို့လုံး ငရဲပြည်မှဆွဲထုတ်သွားသလို ချက်ချင်းအေးစိမ့်သွားတဲ့အရသာအောက်မှာ ကျွန်တော်အပါအဝင် ဆိုက်ကားဆရာများလဲညစာဟင်းကောင်းတစ်ခွက်နဲ့အတူ သူ့အကြောင်းတွေးနေကြမှာ မလွဲပါ ။ ပျဉ်းမနားမြီု့ရှောင်လမ်းမကြီးဘေး အောင်းကုန်း ရွာကလေးမှာ ဦးဘိုးကြွယ်&ဒေါ်အမာ မိဘနှစ်ပါးမှမွေးခဲ့ပြီး မွေးချင်း၃ယောက်အနက် အငယ်ဆုံးသား ။ အမေကလဲဆုံး ..အဖေကလည်းကျန်းမာရေးမကောင်း ,အစ်မကြီးကလဲ အိမ်ထောင်ပြု အစ်ကိုကလဲအဝေးရောက် ။ စာသင်ချင်လွန်းလှတဲ့ဦးစိုးတင့် အ.ထ.က (၂)သို့ကျောင်းတက်ဖို့ ရောက်လာတော့ ဝတ်စုံတစုံသာပါလာသည်။ သူများအိမ်ကနေ ကျောင်းတက်ရသည်မို့ အိမ်ရှင်ကျေနပ်ဖို့ရေခပ်ရသည်။ ရေစည်လှည်းသမားနဲ့အတူနောက်ကနေ ကူတွန်းရသည်။ မိုးရွာလျှင်တစုံတည်းရှိကျောင်းဝတ်စုံကို
Comments Off on တိုက်​စစ်​မှူး အောင်သူ ထိုင်းလိဂ် ဒုတိယသွင်းဂိုးရရှိခဲ့ပြီး ပုလိစ်တယ်ရိုအသင်းလည်း ပထမဆုံး လိဂ်​နိုင်ပွဲ ရရှိ